Atsaharo izany, Andriamatoa Wolf - Fitiavana zazalahy - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ajanony io, Andriamatoa Wolf Average 2.9 / 5 avy amin'ny 13
N / A, manana fomba fijery 25.8K
Tsy nampoiziko fa ny barbariana niditra an-keriny tao an-tranoko dia King Black Wolf avy amin'ny wildkind. Andraso, fa maninona izy no manao izany amiko amin'ny misasakalina? Tsia, tsy ny vatako hatramin'ny hatoka ka hatrany ambany! Sarotra be ny mahatakatra ny tontolon'ny biby! Raha tsy afaka manohitra azy aho dia mety hanana fialamboly mangingina sa?
Chapter 28 Aogositra 30, 2021
Chapter 27 Aogositra 30, 2021
Chapter 26 Aogositra 30, 2021
Chapter 25 Aogositra 30, 2021
Chapter 24 Aogositra 30, 2021
Chapter 23 Aogositra 30, 2021
Chapter 22 Aogositra 30, 2021
Chapter 21 Aogositra 30, 2021
Chapter 20 Aogositra 30, 2021
Chapter 19 Aogositra 30, 2021
Chapter 18 Aogositra 30, 2021
Chapter 17 Aogositra 30, 2021
Chapter 16 Aogositra 30, 2021
Chapter 15 Aogositra 30, 2021
Chapter 14 Aogositra 30, 2021
Chapter 13 Aogositra 30, 2021
Chapter 12 Aogositra 30, 2021
Chapter 11 Aogositra 30, 2021
Chapter 10 Aogositra 30, 2021
Chapter 9 Aogositra 30, 2021
Chapter 8 Aogositra 30, 2021
Chapter 7 Aogositra 30, 2021
Chapter 6 Aogositra 30, 2021
Chapter 5 Aogositra 30, 2021
Chapter 4 Aogositra 30, 2021
Chapter 3 Aogositra 30, 2021
Chapter 2 Aogositra 30, 2021
Chapter 1 Aogositra 30, 2021